Aluminum dihydrogen phosphate dia karazana tsy misy loko sy tsy misy fofona fa tena miraikitra amin'ny rano, mora levona anaty rano ary mivaingana amin'ny mari-pana mahazatra.
Ny ranon-javatra sy ny solid dia manana hery mamatotra simika matanjaka, fanoherana ny hafanana avo, ny fanoherana ny vibration, ny fanoherana ny peeling, ary ny fanoherana ny erosiation amin'ny hafanana avo.Ary manana infrared tsara hisakana ny fiasan'ireny fahaiza-manao sy insulation.
Izany no tena ampiasaina ho binder sy manasitrana mpandraharaha amin'ny famokarana ny hi-temp refractorymaterials ho an'ny lafaoro, famafazana loko, afo tanimanga, fanariana sy ny orinasa foundry.
Tsy misy loko, tsy misy fofona, ranon-javatra manjavozavo be na vovoka fotsy.levona anaty rano.Ampiasaina ho binder ho an'ny fitaovana refractory, indrindra ampiasaina amin'ny indostrian'ny herinaratra, lafaoro hafanana avo, lafaoro fanoherana hafanana ary insulation elektrika.Izy io koa dia ampiasaina amin'ny solika, simika, fanamboaran-tsambo ary teknolojia an-habakabaka.Azo ampiasaina ho toy ny coating inorganic miaraka amin'ny coating organika ihany koa.
ALUMINIUM DIHYDROGEN PHOSPHATE TECHNICAL PARAMETERS
Zavatra andrana PARAMETER TEKNIKA
Bika Aman 'endrika Rano tsy misy loko Vovoka fotsy
Sanda PH 1-3 2-4
►Vokatra viscous mangarahara tsy misy loko na vovoka fotsy, mora levona anaty rano, ary asidra ny vahaolana aqueous.Fatorana simika matanjaka, fanasitranana amin'ny mari-pana amin'ny efitrano, fanoherana ny mari-pana ambony, ny fahaizan'ny infrarora matanjaka ary ny insulation tsara.
►Ampiasaina indrindra amin'ny indostrian'ny herinaratra, lafaoro avo lenta, lafaoro fanoherana hafanana ary insulation elektrika.Izy io koa dia ampiasaina amin'ny solika, simika, fanamboaran-tsambo ary teknolojia an-habakabaka.Azo ampiasaina ho toy ny coating inorganic miaraka amin'ny coating organika ihany koa.
Ny fonosana ranoka dia 30KG na 300KG / amponga;vovoka 25kg / kitapo.
teo aloha: Condensed Aluminum Phosphate Temperature Refractory Manasitrana Agent
Manaraka: Aluminum Dihydrogen Phosphate, Mono Aluminum Phosphate